China 3T fantsom-boaloboka masinina sy mpamatsy | Herbin Ice Systems
Mpanentana ranomandry flake
Manakana milina gilasy
Masinina ranomandry 20T
Masinina ranomandry 10T Tube
Masinina gilasy 5T
Masinina ranomandry 3T
Hery mihazakazaka: 9.375 KW.
Sintan'ny ranomandry: Minus 5 ℃.
Kalitaon'ny ranomandry: Mangarahara sy kristaly.
Savaivony ny ranomandry: 22mm, 29mm, 35mm na hafa.
Refrigerant: R404a, R448a, R449a, na hafa.
Famatsiana herinaratra: famatsiana herinaratra indostrialy 3 dingana.
Fahaiza-mamokatra isan'andro amin'ny ranomandry: tubes gilasy 3000 kg isaky ny 24 ora.
Toetra fiasana mahazatra: 30 ℃ manodidina ary 20 ℃ mari-pana amin'ny rano.
Fanjifana herinaratra: herinaratra 75 KWH amin'ny fanaovana flakes ranomandry 1 taonina.
Ny ranomandry Tube dia karazana ranomandry lava varingarina misy savaivony ivelany ø22 、 ø29 、 ø35mm ary ny halavany 25 ～ 42mm. Ny savaivon'ny lavaka dia matetika ø0 ～ 5mm ary azo ahitsy arakaraka ny fotoana fanaovana ranomandry.
Endri-javatra: Tube ice dia matevina sy mangarahara miaraka amin'ny fotoana fitahirizana lava. Azo inoana fa tsy hitsonika ao anatin'ny fotoana fohy. Tube tsara tarehy dia tsara tarehy, ary mety ho mangarahara 100%, kristaly. Toa tena tsara izany amin'ny zava-pisotro, misotro.
Fampiharana: Sakafo isan'andro, zava-pisotro mangatsiaka, misotro, mitazona ny legioma sy ny hazan-dranomasina ho vaovao, sns.
Ireto ny tombony lehibe amin'ny milina ranomandry Tube ahy.
1.Ny kopian'ny tsara indrindra sy tsara noho ny tsara indrindra.
Tsy mitovy amin'ireo orinasa mpamokatra ranomandry hafa, ny rafitra Herbin Ice dia nanary ny teknolojia fantsom-boaloboka malemy nentin-drazana tamin'ny 2009. Manomboka mandalina sy mikaroka teknolojia ranomandry Vogt izahay hatramin'ny 2009.
Miaraka amin'ny fikarohana sy fivoarana miandalana sy tsy miovaova, ankehitriny isika dia afaka manamboatra milina ranomandry fantsona miaraka amin'ny fampisehoana asa tsara indrindra. Milina Tube ranomandry dia miorina ary manana fotoana fanompoana lava be. Ny milina dia mahomby ary tena mamonjy herinaratra. Ny fantsom-boasary vita amin'ny masinina dia mangarahara, kristaly ary tsara tarehy.
Ny masinina dia miaraka amin'ny haitao farany gilasy fantsona farany. Ireo evaporator dia manana sensor sens de cair, izay mitazona ny haavon'ny rano. Izy io dia mahatonga ny hafanan'ny etona miompana amin'ny rafitra voafehy tsara. Mandritra izany fotoana izany dia manampy mpandray ranoka ambonin'ilay evaporator isika, mpamadika hafanana 2 any amin'ny toerana ilaina, famatsian-dronono marani-tsaina, sns.
Ny compressor dia hiasa foana amin'ny toe-piainana tsara indrindra raha ny compresseur an'ny fantsom-boaloboka sinoa hafa kosa dia mora simba mandritra ny famonoana.
Noho ny haitao avo lenta sy ny famolavolana ny rafitra marani-tsaina dia afaka mampiasa compressor kely kokoa isika hahatratra ilay fahaizana ranomandry mitovy. Ampitahaina amin'ireo masinina ranomandry fantsom-boaloboka sinoa hafa izany. Miaraka amin'ny compresseur kely kokoa, ny masinin-tsirinina fantsom-bokatra ataontsika dia tsy mampiasa herinaratra firy hanaovana ranomandry mitovy.
Andao hikajiantsika amin'ny milina ranomandry 3T / andro.
Ny milina ranomandry vita amin'ny rano sinoa hafa dia mandany herinaratra 105KWH amin'ny fanaovana ranomandry 1 taonina.
Ny milina fantsom-boaloboko dia tsy mandany herinaratra 75KWH fotsiny amin'ny fanaovana ranomandry 1 taonina.
Ny tsy fitoviana amin'ny fanaovana isaky ny fantsom-boasary 1 taonina dia herinaratra 30KWH.
Ka isan'andro, ny fahasamihafana amin'ny fanjifana herinaratra dia 30x3 = 90KWH.
(105-75) x 3 x 365 x 10 = 328,500 KWH, izany no mahasamihafa ny fanjifana herinaratra ao anatin'ny 10 taona.
Raha misafidy ny milina fantsom-boasary 3T / andro ny mpanjifa dia hamonjy herinaratra 328,500 KWH afaka 10 taona izy ireo.
Raha misafidy milina ranomandry flake teknolojia mahantra hafa ny mpanjifa dia handany vola bebe kokoa izy handoavana izany fandaniana herinaratra fanampiny tsy misy dikany izany, 328.500 KWH.
Ohatrinona ny herinaratra 328,500 KWH ao amin'ny firenenao?
Herinaratra 328 500 KWH dia eo amin'ny 45000 $ US any Shina.
3. Kalitao tsara misy fiantohana lava.
80% amin'ireo singa ao amin'ny masinin-dranomandry fantsom-pirandrako dia marika malaza iraisam-pirenena, toa an'i Bitzer, GEA Bock, Danfoss, Schneider, sns.
Ny ekipa mpanamboatra matihanina sy za-draharaha dia mampiasa ny singa tsara.
Izany dia manome antoka anao ho tsara milina ranomandry fantsom-boalavo miaraka amin'ny fampisehoana asa tsara indrindra.
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny rafitra fampangatsiahana dia 20 taona. Raha miova ny zava-bitan'ny rafitry ny vata fampangatsiahana ary lasa tsy ara-dalàna ao anatin'ny 20 taona dia handoa izany isika.
Tsy misy fivoahan'ny etona amin'ny fantsona ao anatin'ny 12 taona.
Tsy misy singa fitahirizana vata fampangatsiahana ao anatin'ny 12 taona. Anisan'izany ny valizy compressor / condenser / evaporator / fanitarana ....
Ny antoka momba ny faritra mihetsika, toy ny motera / paompy / fitondra / herinaratra, dia 2 taona.
4. Fotoana fanaterana haingana.
Ny orinasa misy ahy dia iray amin'ireo lehibe indrindra ao Shina feno mpiasa za-draharaha.
Tsy mila mihoatra ny 20 andro isika hanaovana milina fantsom-boasary 3T / iray na maromaro, 5T / andro, 10T / andro.
Tsy mila mihoatra ny 30 andro isika hanaovana milina fantsom-boasary 20T / andro, 30T / andro.
Ny fotoana famokarana ho an'ny milina iray sy ny milina maro dia mitovy.
Tsy hiandry ela ny mpanjifa vao hahazo ny milina ranomandry fantsona aorian'ny fandoavana.
Previous: Masinina misy ranomandry 2T
Manaraka: Masinina gilasy 5T